Gaas oo Sanca kula kulmay madaxweynaha iyo Raysul Wasaaraha Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sanca – Mareeg.com: Madaxweynaha Maamula Puntland Cabdi-weli Max’ed Cali Gaas oo booqasho ku jooga dalka Yemen ayaa magaalada Sanaca ee xarrunta dalka Yemen kulan rasmi ah kula qaatay Madaxweynaha dalkaas, Abdu Rabbuh Mansur Hadi.
Kulanka labada madaxweyne oo ka dhacay qasriga madaxtooyada dawlada Yemen ee magaalada Sanca ayaa ahaa kulan ahmiyad gaar ah leh, kaas oo muujinayey saaxiibtinimada soo jireenka ah ee ay lee yihiin labada dhinac.
Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa kulankiisii uu la yeeshay madaxweynahada dawlada Yemen waxaa ku weheliyey weftigii balaadhnaa ee uu hogaaminayey.
Dhinaca kale, waxyaabihii looga wada hadlay kulankii ay yeesheen Abdu Rabbuh Mansur Hadi iyo Cabdi-weli Max’ed Cali Gaas ayaa waxaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac, adkaynta amniga iyo kor u qaadida xiriirka gannacsi ee qotada dheer ee ka dhaxeeya labada dhinac.
Sidoo kale waxaa iyana waxyaabahii aadka looga wada xaajooday ka mid ah dhinaca xiriirka wada shaqayneed ee dhinaca siyaasada labada dhinac iyo sidii la isu dhaafsan ama la isu waydaarsan lahaa laba Qunsiliyadood oo laga kala furo magaalooyinka Sanca Iyo Garoowe, amuurtaasi oo la isku afgartay.
Dhanka kale, madaxweynaha maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa sidoo kale magaalada Sanca ee caasimada dalka Yemen kula kulmay Ra’iisal Wasaraha Dawladda Yemen, Mohamed Basindawa.
Kulankii Gaas Iyo Ra’iisal Wasaaraha dalkaasi Yemen ay yeesheen ayaa ahaa mid qaatay saacado badan, kaas oo looga wada hadlay sidii loo adkayn lahaa xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dhinac ee Soomaaliya, gaar ahaan Puntland iyo Yemen, is bedellada dhanka siyaasadda ee ka dhacay Puntland iyo Yemen, arrimaha amaanka iyo kobcinta xiriirka ganacsi ee ay wadaagaan labada dhinac.